INT-WARE: Huawei c8812 ကို coustome rom 4.1.2 တင်နည်း
Huawei c8812 ကို coustome rom 4.1.2 တင်နည်း
မျှဝေသူ Bwar Nge Android နှင့်ဆိုင်သော
မိမိဖုန်းကို root ပြုလုပ်ထားပေးပါ ...။
ပထမဦးဆုံး - CWM Recovery အရင်ဒေါင်းပါ
Download Link အောက်မှာပေးထားပါတယ် ...။
Fastboot ၀င်ပြီး ဖုန်းကို computer နဲ့ချိတ်ပြီး Enter (2) ချက်ခေါက်ပါ ...
reboot ကျပြီး ပြန်တက်လာရင်တော့ CWM Recovery ရပါပြီ..။
မိမိဖုန်းကို Backup ပြုလုပ်ပေးပါ ခုဏက ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ zip ကို memory card ထဲကို ထည့်ပါ ...။
Back up ပြုလုပ်ပေးပြီး reboot ချပါ
Battery ကိုဖြုတ်ပြီး ခဏစောင့်ပါ
Battery ကိုပြန်တက်ပြီး Volume up + Power နဲ့ Recovery ၀င်ပါ
ဒါဆို ကျွန်တော့်တို့ CWM Recovery ကိုရောက်ပါပြီ
ဒီမှာတော့ recovery က တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်
အောက်ပါ ပုံနဲ့ တစ်ကွ အင်္ဂလိပ်လို ဖော်ပြပေးထားပါတယ် ...။
နံပါတ် 2. ဆိုတဲ့ စာကြောင်းကို ရွေးပါ
ဒါက - Install zip from sd card
ထိုနောက် SD Card ထဲက ခုဏက ထည့်ခဲ့တဲ့ Zip File ကိုရွေးပြီး install ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် ..။
3. နဲ့ 4. စာကြောင့်းများကို တစ်ခုချင်းရွေးပြီ ရှင်းပေးပါ ပြီးရင်
အပေါ်ဆုံးစာကြောင်း Restart Menu ကိုရွေးပြီး ဖုန်း reboot ကျသွားပါလိမ့်မယ် ခဏစောင့်ပြီးရင်တော့
CyanogenMod Logo လေးတက်လာပြီး 4.1.2 တင်လို့ ပြီးပါပြီ ...။
The kernels :3.0.8-perf-g21b7128 Shendu ShenduOS # 1
Source code: CyanogenMod + depth OS
CyanogenMod version :10 20,121,021 UNOFFICAL-C8812
Compile date :2013 -01-23
Version number: CM-20130122
Baseband version: 2030
Download Link မှာ Register ပြုလုပ်ပြီး CWM Recovery နဲ့ Coustome Rom 4.1.2 ကိုတော့ရယူပေးပါ